Otu mmebe nke ụbọchị
Ndi otu egwuregwu uwa kachasi nma.
Wenezdee 3 Novemba 2021
Mgbe ụfọdụ ị ga - achọ ndị otu nnukwu ihe ngosi nka nwere ịchepụta ihe dị oke mma. Kwa ,bọchị, anyị na-ewepụta otu egwuregwu pụrụ iche na -enweta ihe okike na otu okike. Choputa ma choputa ihe okike na ihe okike zuru oke, ezigbo ihe ejiji, ejiji, eserese di iche-iche na atumatu atumatu atumatu ndi otu n’uwa n’uwa. Nwee ike mmụọ nsọ site na ọrụ mbụ site n'aka ndị omenkà ukwu.